रोचक बन्दै महासंघको निर्वाचन: पूर्वअध्यक्षहरु को कुन पक्षमा ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
रोचक बन्दै महासंघको निर्वाचन: पूर्वअध्यक्षहरु को कुन पक्षमा ?
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी रौनक बढेको छ ।
विधानअनुसार नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन्‍ने भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितको प्यानल बनाएर महासंघमा चुनावी सरगर्मी बढेको हो ।
आगामी साउन २६ र २७ गते उपत्यकामा हुने चुनावको लागि दुवैपक्षले आ आफ्नो पक्ष बलियो भन्दै दाबी गर्दै आइरहेको छ । किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल दुवै पक्षको चुनावी मैदानमा पूर्वअध्यक्षदेखि भावी अध्यक्षसम्म लागेका छन् ।
ढकालको टीममा जिल्लारनगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसियट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई रहेका छन् ।
ढकालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्का प्यानललाई सहयोग गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । गोल्छा भने प्रधानको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका अर्का प्रत्यासी किशोर प्रधानले पनि प्यानलै बनाएर चुनाबी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
प्रधानको प्यानलमा जिल्लारनगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत उपाध्यक्षमा अन्जन श्रेष्ठ र एसोसियट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति प्रतिस्पर्धामा छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले प्यानलसहित उमेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
प्रधान यसअघि पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनलाई शेखर गोल्छाले पराजित गरेका थिए । ढकाल एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका थिए ।
लकडाउन अगाडि प्रचारप्रसारमा व्यस्त दुवै आकांक्षी लकडाउन खुकुलो बन्दै गएपछि पुनः प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । चुनावी कार्यतालिका अनुसार साउन २६ गते विहान ९ बजेट साधारण सभाको उद्घाटन हुनेछ ।
महासंघको चुनावमा अधिकांश पूर्वअध्यक्षदेखि भावी अध्यक्षसम्म किशोर प्रधान समूहमा देखिएका छन् । चन्द्र ढकाल समूहमा स्पष्टरुपमा खुल्ने एक जना मात्रै पूर्वअध्यक्ष चण्डि ढकालमात्र छन् भने दुई जना पूर्वअध्यक्षहरु सुरज वैद्य र रविभक्त श्रेष्ठ मध्यमार्गी धारमा देखिएका छन् । ।
वैद्य र श्रेष्ठको साथ आफूहरुलाई रहेको किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल दुवै पक्षको दावी छ ।
बाँकी पूर्वअध्यक्षहरु मुरारकासहित महेशलाल प्रधान, पद्य ज्योति, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, प्रदीपजंग पाण्डे, वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा र भावी अध्यक्ष शेखर गोल्छा खुलेर किशोर प्रधान पक्षमा देखिएका छन् ।
पद्य ज्योतिका छोरा शौरभ ज्योति उपाध्यक्षकै उम्मेवार छन् भने प्रदीपजंग पाण्डेका छोरा प्रवलजंग पाण्डे कार्यकारिणी सदस्य उठ्दै छन् ।
चण्डी ढकालदेखि पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज कर्णिकार आफ्नो पक्षमा भएकाले चुनाव जितिने विश्वासमा चन्द्र ढकाल समूह रहको स्रोतको दाबी छ ।
५४ औं वार्षिक साधारणसभाको लागि महासंघल ललितपुरस्थिति हेरिटेज गार्डेन बुकिङ गरिसकेको छ । साधारण सभाको एजेन्‍डा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
महेश्वर शर्मा सिड्नी अष्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज एनएसडब्लु […]
‘लकडाउन सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड जारी, राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुलमा रोक’
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण संख्या बढ्दैगएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक हिँडडुलमा […]
जनताको बचत सुरक्षित गर्नुस् : गभर्नर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जनताको बचत सुरक्षित राख्न नसक्ने बैंक तथा […]
नेपाली टोलीलाई गम्भीर धक्का ,अफगानिस्तानसँग ४९ रनमै अल आउट
साउन ५, काठमाडौं – सिंगापुरमा जारी आईसीसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेट छनोटअन्तर्गत एसिया क्षेत्रको छनोटको तेस्रो […]
काठमाडौं । कालापानी क्षेत्र गायव पारिएको नक्कली नक्सा सरकारले प्रयोग गर्दै आएको नापी विभागले देखाएको छ । तर, […]
जर्मनविङ्स जहाजका सहचालक मानसिक बिरामी थिए: जर्मन मिडिया
चैत १३ ।बर्लिन,जर्मनविङ्स विमानका सहचालक मानसिक बिरामी भएको तथ्य बाहिर आएको छ । उनको घरमा गरिएको गहन […]